China Hardware ye-UPVC Ngaphakathi Inkqubo evulekileyo yefestile yokwenziwa kunye nefektri | Yuqiang
Ihardware ye-UPVC yangaphakathi evulekileyo inkqubo yeefestile sisisombululo esifanelekileyo seenkqubo zeewindows ze-UPVC ze-UPVC
IWindows, iHardware ye-UPVC yangaphakathi evulekileyo inkqubo yeefestile ilungele i-UPVC yewindows ene-U yohlobo lwe-euro-slot.
Ihardware ye-UPVC yangaphakathi evulekileyo inkqubo yewindows ifanele ububanzi be-sash FFB: 400mm-750mm kunye nokuphakama FFH: 400mm-1600mm, umda ophakanyisiweyo wobubanzi nokuphakama 1.5: 1, ukulayishwa okuphezulu ≦ 60kg, Inqanaba lokuthwala umthwalo lixhomekeke ihenjisi. Ungabhekisa kwiiparameter zehenjisi.
Ubungakanani bokuzimela kwe fan (ubunzima bebonke bezinto ezifana neglasi kunye nezinto ezimilise fan) * 1.4 (into yokhuseleko) ingaphantsi okanye ilingana nobunzima bokuthwala ihinji.
Ixabiso FOB: I-4.44USD / SET
1.Ihardware ye-UPVC yangaphakathi evulekileyo inkqubo yewindows ilungele i-UPVC yewindows ene-U uhlobo lwe-euro-slot.
2. Ilungele ububanzi be-sash i-FFB: 400MM-750MM kunye nokuphakama kwe-FFH: 400mm-1600mm, umda ophakanyisiweyo wobubanzi nokuphakama 1.5: 1.
3. Ukulayisha okuphezulu ≦ 60kg, Inqanaba lokuthwala umthwalo lixhomekeke kwihenjisi. Ungabhekisa kwiiparameter zehenjisi. Ubungakanani bokuzimela kwe fan (ubunzima bebonke bezinto ezinje ngeglasi kunye nezinto ezimilise fan) * 1.4 (into yokhuseleko) ingaphantsi okanye ilingana nobunzima bokuthwala ihinji
Izixhobo zokwenza i-UPVC ngaphakathi ngaphakathi ukuvula inkqubo
Uthotho No. Igama lezahlulo Into No. Hayi. Ukucaciswa Amanqaku okutshixa Amagqabantshintshi
1 Ihenjisi ephezulu (Ekhohlo) I-SPK-0110013 / 0110198-1 1 L 9mm
Ihenjisi ephezulu (ngasekunene) I-SPK-0110014 / 0110199-1 1 R 9mm
3 Ukuhanjiswa kweGiya (7.5mm)
I-SPK-0110106-3 1 600 2
4 Ihenjisi engezantsi (ekhohlo) SPK-0110013 / 0110198-4 1 L 9mm
Ihenjisi engezantsi (ngasekunene) I-SPK-0110014 / 0110199-4 1 R 9mm
5 Ihenjisi ephakathi I-SPK-0110016/01100155 1 Ukhetho
6 Ukuhlala kwifriction I-SPK-0260003-6 1 8 '~ 16 "
7 Phatha SPK-0110027-7 1
7A Phatha I-SPK-0270001-7A 1
Kukho iintlobo ngeentlobo zeziphatho onokukhetha kuzo: Isibambo seminwe, isiphatho esisezantsi sesithathu, isiphatho sesihlalo esikwere, isiphatho ngesitshixo
Ukufakwa komzobo weHardware yeAluminiyam ukujika kunye nokujikisa kwewindow
Fakela ngokomzobo 1, umzobo 2, umzobo 3 ... nganye nganye ukuyifaka
Izinto ezahlukeneyo ezikhoyo ukuhlangabezana neemfuno zakho ezahlukeneyo, zomelele kwaye zomelele ixesha elide.
Sebenzisa izixhobo zovavanyo ukuvavanya iimveliso, umaleko ngokujonga umaleko, umgangatho wolawulo.
Ungenziwa ngemfuneko kwimizobo kunye neesampuli, sikunika izisombululo ezifanelekileyo.
Sebenzisa izixhobo zovavanyo ukuvavanya iimveliso, umaleko ngokobume, ukuhlolwa, umgangatho wolawulo.
Igama lemveliso: Izixhobo ze-UPVC yangaphakathi evulekileyo inkqubo yewindows
Ukucaciswa kwemveliso: isiphatho (isiphatho esiqhelekileyo, isiphatho sesihlalo esikwere)
Ukuhanjiswa kwe-UPVC Gear: 400 # 600 # 800 # 1000 # 1200 #
Ihenjisi ye-UPVC: Ekhohlo, ngasekunene
Iimpawu zeMveliso: i-90kg ethwele umthwalo, ngasekhohlo nangasekunene kuyatshintshaniswa, ufakelo olukhawulezayo, ukuhambisa ngokugudileyo, akukho ngxolo.
Izinto Product: Carbon Steel, zinc ingxubevange
Egqithileyo Izixhobo zokwenza ialuminium jika kunye nenkqubo yewindows eguqukayo
Okulandelayo: Isixhobo seHardware se-UPVC sokujikisa kunye nokujika kwenkqubo yewindows
Inkqubo ye-windows ye-UPVC yefestile yangaphandle yefestile
I-UPVC yefestile yokuvula yangaphandle kunye ne-windo exhonywe ngaphezulu ...
Inkqubo ye-windows ye-UPVC yefestile yangaphakathi yehardware
I-UPVC yefestile enganyangekiyo ngaphakathi ngaphakathi.